ကန်စွန်းရွက်စားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ – Shwe Yaung Lan
ကန်စွန်းရွက်စားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁. အိပ်ရေးဝ၀ အိပ်ပျော်စေပါတယ်။
ကန်စွန်းရွက်ဟာ အိပ်မပျော်တဲ့သူ နဲ့ အိပ်ပျော်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ သူတွေအတွက် အိမ်သုံး သဘာဝဆေး တစ်လက်လိုမျိုး အသုံးဝင်ပါတယ်။ ကန်စွန်းရွက်ဟာ အိပ်မောကျအောင် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိလို့ပါ။ ကန်စွန်းရွက်ကို စားရင် အချိန် ကြာကြာ အိပ်ပျော်စေတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ အိပ်စက်မှု အရည်အသွေးကို ပြည့်ဝစေ တာကြောင့် နိုးထလာတဲ့အခါ လန်းဆန်းစေနိုင်ပါတယ်။
ကန်စွန်းရွက်မှာ အလေးချိန်တူ ခရမ်းချဉ်သီးထက် ပရိုတင်းဓာတ် လေးဆပိုမို ပါဝင်ပြီး ကယ်လ်စီယမ် ပါဝင်မှုက ၁၂ ဆ ပိုများကာ ကာရိုတင်းဓာတ်လည်း ပိုမိုပါဝင်ပါတယ်။ ကန်ဇွန်းရွက်မှာ အမျှင်ဓာတ်များစွာ ပါဝင်တာကြောင့် အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်း လှုပ်ရှားမှုကို ကောင်းမွန် စေပြီး ဝမ်းမှန်မှန်သွားစေပါတယ်။
၃. ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျစေပါတယ်။
ကန်စွန်းရွက်ဟာ ဝမ်းချုပ်တာ၊ လိပ်ခေါင်းဖြစ်တာတွေကို သက်သာစေသလို ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျလိုသူတွေ အတွက် စားသုံးသင့်ပါတယ်။
၄. သွေးဖိအားကို ထိန်းပေးပါတယ်။
သွေးတိုးနေ သူတွေမှာ ကန်စွန်းရွက်ကို စားပေးရင် သွေးဖိအားလျော့ ကျစေပါတယ်။ ကန်စွန်းရွက်ဟာ သွေးကြောထဲရှိ အဆီတွေ ကင်းဝေးစေရေးအတွက် အရေးပါပါတယ်။
၅. သိုင်းရွိုက်ဂလင်းရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ကန်စွန်းရွက်မှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်ပါဝင်မှု မြင့်မားတာကြောင့် ကင်ဆာမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို နှလုံးရောဂါကိုလည်း ကင်းဝေးစေပါတယ်။
၆. ရောင်ရမ်းမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။
ကန်စွန်းရွက်ကို သုပ်ပြီး စားတာကြောင့် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ အအေးမိတာ၊ချောင်းဆိုး တာ နဲ့ လေပြွန်ရောင်ရမ်းတာတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ ကန်စွန်းရွက်မှာ အမိုင်နိုအက်စစ် အများအပြားပါဝင်ကာ အဆိပ်တား အာနိသင်၊ ရောင်ရမ်း မှုကျစေတဲ့ အာနိသင်၊ ဆီးသွား စေတဲ့ အာနိသင်နဲ့ အိပ်မောကျစေတဲ့ အာနိသင်တွေကို ရရှိစေပါတယ်။ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကိုလည်း ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
ကန်စွန်းရွက်ကို အဆိပ်ပြေစေတဲ့ ဆေးတစ်လက်အဖြစ် အသုံးပြုကြပြီး အစားမှား တာကြောင့် အော့အန် တဲ့ ဝေဒနာတွေကို သက်သာစေပါတယ်။
– အမျိုးသမီးများ လစဉ်ရာသီလာစဉ် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။ ခေါင်းကိုက်တာ၊ သွားကိုက်တာကို သက်သာစေပါတယ်။ ဗောက်ထတာနဲ့ အရေပြားပြဿနာတွေအတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။
– အနာတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ နာ့ဗ်ကြောရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
လူသိနည်းလှသော သံပုရားသီးရဲ့ အသုံးဝင်ပုံမျာ